အမျိုးသမီးဝတ်စုံကို - ဤပူးတွဲရပါမည်သည့်အဝတ်အစား၏ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖြတ်ပေါ်တွင်အရောင်သင်ကကိုက်ညီလျှင်, အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့ဤအရာကိုသင်နှစ်သက်သောပါလိမ့်မယ်။ ချိုသော, Ariane ထဲ, ထွန်းတောက်ရန်အထူးဂရုပြု, ဖက်ရှင်အနီရောင်ဝတ်စုံကိုဝင်ကြ၏။
အမျိုးသမီးအနီရောင်ဝတ်စုံ - စတိုင်များ
ဝတ်စုံအမြဲသက်ဆိုင်ရာများမှာသူတို့ရဲ့ရာထူးလွှဲပြောင်းမပေးပါဘူး, ဤရာသီအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်အားလုံးဒီဇိုင်နာ collection များကိုများတွင်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ ထိုသို့အစဉ်အမြဲ, stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများမိန်းကလေးများစတိုင်များများစွာသောရှေးခယျြမှုပေးပြီ:
အနီရောင်ဘောင်းဘီဝတ်စုံကိုအံ့ဘွယ်သောအမှုလုပျနိုငျ - သူကပိုမိုပါးလွှာပေမယ့်, သင်တန်း, စနစ်တကျလိုက်ဖက်ဘောင်းဘီလျှင်အောင်သည်ကိန်းဂဏန်းထားပါတယ်။ လက်ရှိတွင်အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ဖွင့်ဘောင်းဘီ-ပိုက်, ဒါပေမယ့်လည်းလျော့ရဲရဲနဲ့ဘောင်းဘီမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားမော်ဒယ်ကို select ပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးအနီရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအင်္ကျီ option ကိုအပေါ်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ တစ်နည်းနည်းနှင့်အတူခဲတံစကတ်နှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီတိုတိုအင်္ကျီလက်ရုံးကြက်သွန်နီအတွက်သင့်လျော်သောကြည့်ရှုမည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကျောခိုင်းထားသောအနီရောင်များမှာသာလျှင်။
sporty အနီရောင်ဝတ်စုံကို - ကရယ်စရာနှင့်ပျော်စရာပါပဲ။ ဤသည်ဝတ်စုံကိုနံနက်ပြေးရတာများအတွက်စိတ်ဓါတ်များပြုစုမည်သူတစ်ဦးပျော်ပွဲစားဘို့အဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ကျေးလက်ပါလိမ့်မယ်။
အနီရောင်ဝတ်စုံကိုပေါ့ပေါ့စတိုင်ဿုံကိုက်ညီ။ မော်ဒယ် Pick ဘောင်းဘီ 7/8 အလွန်ချစ်စရာကောင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှု feeling, နေ့တိုင်းအင်္ကျီလက်သို့မဟုတ်အတိုအင်္ကျီလက်မပါဘဲတစ်ဦးဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်တစ်ဦး wear ကို item နှင့်အတူ, ကောင်းတဲ့အဖွင့်ခြေကျင်း။ ကောင်းပြီဒီရှုထောင့်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီ "oversayz" လိမ့်မည်။
အနီရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ပထမဦးစွာမိမိလည်ပင်းနှင့်ညှပ်ရိုးဖော်ထုတ်, အတွင်းခံအဝတ်အစားကိုဝတ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာဖြစ်နိုင် - ကြက်သွန်နီစုံစုံပေမယ့် sexy လှည့်;
အမျိုးသမီးအနီရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံကို, လက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံးသို့မဟုတ် Satchel အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်သို့မဟုတ်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်တီရှပ်ကိုဖြည့်သင့်သည်,
ညနေပိုင်းတွင်ကြက်သွန်နီအောင်ဝတ်စုံမိတ်ကပ်၏ပွဲခံကိုအလေးပေး, ဒါပေမယ့်တစုံတယောက်သောသူသည်အရာကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန် - သင်၏မျက်စိသို့မဟုတ်ပါးစပ်တစ်အလှဆင် clutch ဖမ်းပြီးဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်အတူဖိနပ်ဝတ်ဆင်နှင့်ကဲဒါဆိုရင်တော့ - သင်ကကမ္ဘာကြီးကိုအောငျနိုငျဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
အနီ, အဖြူအနက်ရောင်, ရွှေအရောင်, ပိုစိတ်အေးလက်အေးကြောင့်မီးခိုးရောင်ကြည့်, အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့်အတူကောင်းစွာတတ် - သင့်ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးသောအခါစိတ်ထဲ၌ဤသည်းခံကြ၏။
စားဆင်ယင်-up, ချွေးထွက် - ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များ၏ 35 ဓါတ်ပုံ In-hoodie စားဆင်ယင်
Sketchers Sneaker - အဘယ်အရာကိုမူရင်းရဲ Sneaker Skechers ဝတ်ဆင်နည်း
ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖိနပ် - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်နှင့်မည်သို့ဖက်ရှင်ပုံရိပ်များဖန်တီးနည်း
Cheryl Cole ကိုနှင့် Liam Payne အစိတ်အပိုင်းယခင်ကထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာများမှာ
Nina Dobrev ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါသလဲ
Mark Zuckerberg ဟာဒုတိယအကြိမ်ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်
ဘယ်အချိန်မှာအစားထိုးနှင်းတော - ကျဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်နွေဦး?
ပန်ဒိုရာလက်ကောက် - တန်ဖိုးကိုထိုမှပါး
ကလေးများအတွက် Herpangina - ကုသမှု
သူတို့ကထွက်ခွာသွားကြပြီမဟုတ်! "နီနာအကြောင်းအားလုံး" ၏ Premiere မီနှင့်အပြီး Ewan လို့ McGregor နဲ့ Mary ဧလိရှဗက် Winstead
ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အနာဒူးထော - ဘာလုပ်ရမှန်း?